The 11 PlayStation egwuregwu ị nnọọ ike na-atụ uche na-abịa afọ - News Ọchịchị
The 11 PlayStation egwuregwu ị nnọọ ike na-atụ uche na-abịa afọ
Isiokwu a na-akpọ “The 11 PlayStation egwuregwu ị nnọọ ike na-atụ uche na-abịa afọ” e dere site Samuel Gibbs, n'ihi na theguardian.com on Tuesday 16 June 2015 12.00 UTC
Sony gosiri mmeri a nnukwu nchịkọta ọhụrụ egwuregwu, nyere ọhụrụ nkọwa on nanị ọcha ke ụfọdụ nnukwu egwuregwu, na mara ọkwa na ya Project Morpheus mebere eziokwu ekweisi ga-abụ dị n'afọ ọzọ.
N'ofè Final Fantasy VII remake, na Shenmue III Kickstarter mgbasa ozi, ebe a bụ 12 ihe mkpa ka ị mara banyere Sony si PlayStation lineup n'ihi na n'afọ ọzọ.
Sony si Project Morpheus VR ekweisi ga-abụ dị n'akụkụ mbụ nke ọzọ afọ. Foto: Jae C. Hong / AP
Sony kpughere a ole na ole obere ibe n'ibe banyere ya virtual eziokwu ekweisi na Oculus osompi oru ngo Morpheus na E3. Ọ ga-abụ dị n'akụkụ mbụ nke ọzọ afọ, -efu "ọtụtụ narị dollar" na ga-enwe gburugburu 30 egwuregwu, ọchị site na mgbaghoju anya na-atụrụ egwuregwu ka a mbụ onye multi-ọkpụkpọ shooter si Guerilla Studios.
Ikpeazụ Guardian ga-adị dị egwu n'afọ ọzọ mgbe ihe karịrị afọ ise nke nchere.
Sony re-mara ọkwa Ikpeazụ Guardian, ndị gụrụ oké atụ anya atọ egwuregwu si Okike nke acclaimed njem egwuregwu Ico na-agbọpụta nke Colossus, nke na-ewepụta gị na-achịkwa otu nwatakịrị nwoke ịgagharị a lara n'iyi na-enyemaka nke a ibu nnụnụ / nkịta ihe.
Afọ ise gara aga Sony kpughere egwuregwu na E3 maka PS3, now ụlọ ọrụ na-ekwekwa nkwa na ọ ga-adị dị na na na PS4 n'afọ ọzọ.
Director nke usoro, Fumito Ueda, ga-ka isi ihe egwuregwu n'agbanyeghị agaghịkwa na-arụ ọrụ maka Sony.
Ọ dịghị mmadụ Sky
The procedurally eme ohere ngagharị game-ekwe nkwa, adịghị agwụ agwụ ụwa mebie otú n'etiti, chọta ndụ ọhụrụ na ịfụ stof. Foto: Ọ dịghị mmadụ Sky
Epic ohere ngagharị game No mmadụ Sky si British Mmepụta Hello Games e gosiri oyi, gụnyere agha, ụfọdụ njirimara nke ọbịa umu na ezi bit nke na-ebibi gburugburu ebe obibi - ihe niile ị ga-achọ si a Star mee njem ahụ-dị ka ahụmahụ na-n'atụghị egwu na-aga ebe ọ dịghị onye nwere kemgbe tupu.
Isi n'ire ebe nke egwuregwu bụ n'oké ọnụ ọgụgụ: -adịghị agwụ agwụ procedurally eme kpakpando usoro na-eche Player mebie otú n'etiti na-amalite ịgagharị, niile kere a 10-onye Indie Onye Mmepụta dabeere na Guildford.
Horizon: efu Dawn
Cheta maka robotic dinosaurs na Horizon Zero Dawn.
Dachapụ 4 ọ na-abụghị nanị post-apocalyptic ụwa na-eche PS4 gamers. A atọ onye roleplaying egwuregwu si Killzone Mmepụta okpuru Games, Horizon: Efu Dawn ọnọde a n'ụwa ọhụrụ na-eto eto si a bibie ochie ahụ ebe ígwè ọrụ na-anọdụ na elu nke nri yinye. The egwuregwu atụmatụ a nwaanyị protagonist, home mere agha na-achụ nta nke nnukwu robotic dinosaurs, ruru si n'afọ ọzọ.
Uncharted 4: Otu Onye Ohi si Ọgwụgwụ
Netan Drake si e weere ikpeazụ njem. Foto: Sony
Sony oké atụ anya njem egwuregwu usoro ga-ya nke anọ na e weere ikpeazụ outing afọ a. Uncharted 4: Otu Onye Ohi si End ga-eri nri Fans ihe nke otu na ịlụ ọgụ ìgwè, N'ọgbụgba égbè, rịa na ọduọ site obodo n'okporo ámá. Indiana Jones ọ bụla ọzọ aha.
The ọhụrụ egwuregwu si Little Big Planet-kere Media molekul bụ ihe ọzọ magburu Mee-your-onwe game. Nke a na oge ọ bụ na-erughị banyere obere ákwà na òtù ndị ọzọ banyere eke ihe a nrọ-dị ka ụwa.
Mara mma nke ukwuu ihe ọ bụla nwere ike kere n'ime egwuregwu gburugburu ebe obibi tinyere art, egwuregwu, fim na music, o doro anya na.
Ihe ga-esi weird dị n'oké ọhịa. Foto: Firewatch
Ị dị ka maa ụlọikwuu? A weird akụkọ akara? Mgbe ahụ Campo Santo si Firewatch nwere ike ịbụ n'ihi na ị. Ị na-egwu otu nwoke na-ewe a ọrụ dị ka a ọhịa ele anya mgbe ya na onye ndụ dara mgbe, ya naanị na kọntaktị a nwaanyị ngalaba-ọrụ n'elu redio mgbe iju ihe-amalite na-eme na wilderness.
Akara Aka: na E King
More akụkọ, ọzọ etiwapụ na a ole na ole PlayStation exclusives na-esonụ Destiny mgbasa.
Dị ka na mbụ egwuregwu, Kacha ọhụrụ Destiny mgbasa ruru na September ga-enwe ihe ole na ole nanị ka Sony si consoles. PS3 na PS4 gamers ga-esi na-egwu ihe mmezi iku a na-akpọ ahụ kwuo ihe-ulo-alụ ọgụ Vex, ụfọdụ nanị ihe agha na a ọhụrụ osisi scout égbè na a sniper-dị ka akporo akpọ Jade oke bekee.
Oku ọrụ: Black Ops III
More oku ọrụ, a oge na nanị beta na Sony si console. Foto: Christian Petersen / Getty Images
Activision si juggernaut nke a mbụ onye shooter, Oku ọrụ Black Ops III, ga-ahụ ọhụrụ map nanị na PlayStation 4, mgbe online beta ule nke egwuregwu ga-ga-ejedebeghị na Sony si console.
A n'ụwa ọhụrụ nke mgbu mmadu na-echere. Foto: Michael Nelson / EPA
The nkwọcha-isi ogbu mmadụ 47 bụ azụ ọzọ, na yiri Black Ops III, ndị ọhụrụ Hitman ga-agba ọsọ site a beta ule nke egwuregwu nanị na PS4 n'ihu igba egbe. -Atụ anya ihe-ike na imegwara.
A Final Fantasy VII remake abụghị nanị ọma sitere na usoro. A egwuregwu n'ihi na PS4 na PS Vita akpọ World of Final Fantasy na-kpughere maka 2016, featuring a collection of cutesy nsụgharị nke kpochapụwo Final Fantasy odide. Ihe ha ga-eme adịghị n'ezie kpughere.
• E3 2015: Ubisoft-eme atụmatụ oké ọchịchọ na-elekọta mmadụ mebere eziokwu ahụmahụ
• E3 2015: Mọ Recon Wildlands ga-Ubisoft kasị ukwuu mgbe open-ụwa egwuregwu
• E3 2015: Xbox obi ụtọ nwa na Lara Croft, okirikiri ọkụ n'isi 5 na holographic Minecraft
Wacom achara icheku ọkụ Review
Brain ji alụso ọrịa mkpụrụ ndụ hyperactive na isi mgbaka ...
-Aṅụ sịga elu-ike-afọ nwere ike imebi akwara fi ...
20243	0 Nkeji edemede, Oku ọrụ, Culture, E3, E3 2015, Games, News, PlayStation, PlayStation 4, Samuel Gibbs, Sony, Technology, Virtual eziokwu, kọmputa
← Dọkịta na-awa ekwe mmadụ mbụ isi transplant na-eme ka pitch na-US dọkịta Bụ Nokia 3210 kasịnụ ekwentị niile oge? →